Daawo Sawirada: Qaabkii Danab ula wareegeen Kuntuwaarey iyo Saraakiil la dilay (Magacyada) | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Daawo Sawirada: Qaabkii Danab ula wareegeen Kuntuwaarey iyo Saraakiil la dilay (Magacyada)
Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya ee Danab ayaa Shalay howlgal qorsheesan kula wareegay degmada Kuntuwaarey ee gobolka Shabeelaha Hoose , waxaana degmadaan horey u maamuli jiray dagaalyahanada Al Shabaab.
Dagaal kooban oo dhacay ayaa ciidamada Kumaandooska Danab kula wareegeen degmada Kuntuwaarey oo la sheegay in aheyd taliska ugu weyn ee Al Shabaab ku lahaayeen gobolka Shabeelaha Hoose.
Taliyaha Guutada 16aad ee Kumaandooska Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdi maalik Maalin oo howlgalka hogaaminayay ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay Kuntuwaarey lagu dilay saraakiil sar sare oo katirsanaa Al Shabaab.
Waxa uu sidoo kale sheegay taliyaha in ciidamada kumaandooska Danab xabsi weyn oo kuyaala degmada Kuntuwaarey kasii daayeen maxaabiis Al Shabaab u xirneed sidoo kale soo furteen caruur Al Shabaab u diyaarinayeen in dagaal galiyaan isna qarxiyaan.
Taliska Danab ayaa magacayda Saraakiisha Al Shabaab laga dilay ku sheegay:
Taliyaha Guutada 16aad ee Kumaandooska Danab Gle Ismaaciil Cabdi maalik Maalin ayaa sheegay in ay sii socon doonaan howlgalada Al Shabaab uga saarayaan gobolada dalka gaar ahaan gobolka Shabeelaha Hoose oo hada howlgalo balaaran ka socdaan.
Daawo Sawirada: Qaabkii Danab ula wareegeen Kuntuwaarey iyo Saraakiil la dilay (Magacyada) was last modified: August 15th, 2020 by Admin
Dhageyso:-Wareeysi degmada qasax dheer oo kahadlay qarax kadhacay maqaayad Kutaala